Owesifazane waseNigeria udala amaWecyclers, okuyinkampani yokuqoqa imfucuza nokuvuselela kabusha - i-Afrikhepri Fondation
WAma-ecycler anikezela ngensizakalo yokuvuselela kabusha esuselwa kumabhayisikili kanye ne uhlelo isayensi yekhompyutha. Ivumelaniswa nezidingo zabahlali basemijondolo. Kufaka isandla ekuphathweni kahle kwemfucuza yasemadolobheni eLagos;
Eyasungulwa ku-2012, i-WECYCLERS yinkampani yokuqoqa imfucuza yenhlalakahle ezinikezele ekuthuthukiseni ukuphathwa kwemfucuza ezindaweni ezingahlelekile eLagos, eNigeria. Iqoqo lenziwa nge-scooters, okuthiwe Wecycles, ezijikeleza kulezi zindawo futhi zibuyise imfucuza kusuka kubakhileyo. Le nkunkuma ihlelwa futhi isakazwe ezitshalweni zendawo zokuvuselela kabusha. I-WECYCLERS ivuza imindeni ngempahla yasendlini ngokusekelwe kumthamo wemfucuza eqoqwe, ngaleyo ndlela ingenisa abantu ukuthi bavuselele amasu. I-WECYCLERS imelela kuze kube yimanje amakhaya abalingani be-3400, imisebenzi ye-50 eyakhiwe, kanye namathani we-525 edoti eqoqwe.
“Ukuphathwa kwemfucuza kungenye yezinkinga ezinkulu zabantu abampofu eNigeria. Sifuna ukudala uhlelo olungasenzi ukuchitha inkinga, kepha isisombululo sawo wonke umuntu. "- Bilikiss Adebiyi
Wazalelwa futhi wakhulela eLagos nezingane zakubo ezi-4, uBilikiss Adebiyi wafunda wasebenza iminyaka eminingana e-United States ngaphambi kokwenza iphrojekthi ye-Wecyclers ngesikhathi se-MBA kwezamabhizinisi eMIT. Uphendukele emkhakheni wokuphathwa kwemfucuza, eqinisekile ngamandla ayo amakhulu eNigeria, ngokwebhizinisi kanye nomthelela kubantu. Ubuyele eLagos e2012 futhi wazinikela ngokugcwele kuWecyclers.
Kungani lokhu kudingeka?
INigeria inabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-170, okubandakanya nezigidi ezingama-21 enkulumweni yaseLagos kuphela, inhlokodolobha yezomnotho kuleliya lizwe. Yizwe elinabantu abaningi kakhulu e-Afrika eseNingizimu yeSahara. Ukwanda kwabantu kunamandla (izakhamizi ezengeziwe ezingama-250 unyaka nonyaka) futhi kulinganiselwa ukuthi idolobha lizofinyelela kubantu abayizigidi ezingama-000 ngonyaka ka-35.
Ngaphezulu kwamathani ayi-10 000 kadoti akhiqizwa nsuku zonke edolobheni laseLagos, elibhekene nokushoda kwengqalasizinda yokuphatha le mfucuza. Ngaphansi kwengxenye yalo doti (cishe u-40%) uqoqwa ohulumeni bakamasipala futhi kuphela u-13% wezinto ezingaphinde zisebenze ezitholakalayo.
Ukuhlaziywa kweMatrix & Impact
Ngakho-ke i-SME ngayinye iyisihloko, esikhuphuka semibiko, sokuhlaziywa okujulile komthelela. Ngokususelwa kunqubo eklanywe yithimba lephrojekthi, lolu cwaningo lwenziwa ngokubambisana eduze nenkampani. Izinhlobo ezahlukahlukene zomthelela we-SME (ezomnotho, ezenhlalo, ezemvelo) kanye nababambiqhaza abathintekayo (amakhasimende, abasebenzi, abahlinzeki) ziyahlaziywa futhi zibhalwe ku-matrix yomthelela okuyiyona ntambo evamile yesibhamu kanye nezingxoxo. ngesikhathi sombiko esizeni.
UMPHUMELA # 1: thuthukisa indawo yokuhlala
Amathani ayi-289 wamabhodlela epulasitiki, amathani ayi-195 ezikhwama zepulasitiki, amathani angama-43 amakani e-aluminium aqoqwa futhi asetshenziswa kabusha eminyakeni emibili. Ukusetshenziswa kwama-scooter ukuqoqa kuvumela ukufinyelela ezifundeni ezingasetshenziswanga kahle ngomthelela omncane kakhulu kwezemvelo.
UMPHUMELA # 2: Ukuguqula imfucuza ibe yimali engenayo
Imindeni yabalingani ikakhulukazi abathengisi abangahlelekile nabafundi. Umndeni wozakwethu uthola isilinganiso esingu- $ 10 ngenyanga kusuka kwaWecyclers, okungamela kuze kufike ku-20% wemali engenayo yomndeni. Imindeni engama-3400 ingabalingani abakhuthele, ikakhulukazi ezindaweni ezihlwempu.
UMPHUMELA # 3: dala amathuba emisebenzi
Ukudala imisebenzi ye-52, kuhlanganise ne-37 esigcwele isikhathi (abaphathi nabaqoqi). Izinhlayiya ze-15 zokuchitha inkunkuma zinezivumelwano zesikhashana. Imali engenayo yi-$ 125 ngenyanga, okungukuthi i-$ 8 ngaphezu kwenani eliphansi likazwelonke. Inkampani yokukhiqiza ubuhlalu beplastiki isebenzisa abantu abangu-10 futhi incike ku-100% we-Wecyclers imfucuza.
UMPHUMELA # 4: ukukhuthaza umnotho wendawo
AbakwaWecyclers bathenga amabhayisikili abo amathathu kumphakeli wendawo. Ngayinye ibiza u- $ 700, futhi ngemikhumbi yama-scooter angama-25, lokho kungaphezu kokuthenga okungama- $ 17. I-Wecyclers isebenzisa isoftware eyenziwe yinkampani yaseNigeria ukuphatha ukuhamba kwayo kwe-sms. Cishe u- $ 000 wakhokhelwa izwe laseNigeria ngentela nemisebenzi ngonyaka odlule.
UMPHUMELA # 5: ukusekelwa komnotho osemthethweni
Iningi labasebenzi livela ezindaweni ezihlwempu futhi lokhu kuvame ukuba ngumsebenzi wabo wokuqala osemthethweni. I-Wecyclers isiza imindeni ebambisene nayo ukuvula i-akhawunti yasebhange esemthethweni ukuze ithole amaphuzu we-wecyclers. Le akhawunti yasebhange bese isetshenziselwa ukukhokha irenti, ukuthola umholo.
Amazwi Onembeza - Idokhumentari (2014)
Black Athena: izimpande ezihlasimulisayo zempucuko yasendulo (Kindle)
Christian Master Muslim White Slaves - Imibhalo (2006)